नमुना कामको अवलोकन गर्न देशभरका जनप्रतिनिधिको लर्को
Thu, Oct 17, 2019 at 2:17pm
अन्य स्थानीय तहलाई लोभ्याउने गरी के गर्दैछ भक्तपुर ?
मंगलवार, १४ जेष्ठ २०७६,	आहाखबर	2K
भक्तपुर, १४ जेठ ।
जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अधिकांश स्थानीय तहको आलोचना हुँदा भक्तपुर नगरपालिका भने अपवादमा परेको छ । भक्तपुरले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी, विकास निर्माणलगायतका काममा जनताको मन जितेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा फोहोर समस्या विकराल छ । तर, भक्तपुर नगरपालिकाले भने फोहोरलाई मोहर बनाइरहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, व्यवस्थित सहर निर्माणलगायतका क्षेत्रमा गरेका नमुना कामहरू हेर्न देशभरका जनप्रतिनिधि भक्तपुर नगरपालिकाको अवलोकनमा आउन थालेका छन् । हालसम्म ३१ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भक्तपुर नगरको अवलोकन गरिसकेका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाको अवलोकन भ्रमण गर्ने स्थानीय तहहरू
१) वुटवल उपमहानपाकाकी उपमेयर गोमा आचार्यसहितको प्रतिनिधिमण्डल
२) बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रतिनिधिमण्डल
३) कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
४) नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
५) बेंसीसहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
६) नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
७) गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्चला चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
८) घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपमेयर प्रेमकुमारी थापा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
९) भेरीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
१०) वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रतिनिधिमण्डल
११) बाँसगढी नगरपालिकाको प्रतिनिधिमण्डल
१२) कविलासी नगरपालिकाको प्रतिनिधिमण्डल
१३) हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधिमण्डल
१४) दुहवी नगरपालिकाको प्रतिनिधिमण्डल
१५) झापा दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
१६) शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
१७) साँखु नगरपालिकाकोे प्रतिनिधि मण्डल
१८) ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
१९) कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२०) काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२१) मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२२) ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि दिनेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२३) दैलेख चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका मेयर सूर्यबहादुर शाही नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२४) टोखा नगरापलिकाकी उपमेयर ज्ञानमाया डंगोल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२५) कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उपमेयर सरस्वती खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२६) धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यबाहक मेयर मञ्जु सुवेदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२७) फलेबास नगरपालिकाका मेयर पद्मपाणी शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२८) अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विश्वश्वरप्रसाद ओझा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
२९) इटहरी उपमहानपाकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
३०) बोदेबर्साइन नगरपालिकाका मेयर अतेशसिंह यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल
३१) लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रतिनिधिमण्डल
भक्तपुर नगरपालिकाबाट के सिक्ने ?
डेढ करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिलाई
भक्तपुर नगरपालिकाले डेढ करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गरिरहेको मेयर सुनील प्रजापतिले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ताले गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्छन, आफ्नै गाउँको विकासमा उहाँहरूको सकारात्मक सक्रियता हुन्छ ।’ ठेकेदारले सस्तोमा बनाए पनि गुणस्तरलाई ध्यान नदिने भएकाले उपभोक्ता समितिलाई नै सक्रिय बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत बजेट खर्चमा कुनै समस्या नहुने प्रजापतिले बताए । ‘कुरा खर्चको मात्रै हैन, कामको गुणस्तरको पनि हो, राम्रो काम हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु,’ उनी भन्छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकामा फोहोरले कुनै पीडा दिएको छैन । बरु, फोहोरले मोहर दिलाएको छ । दैनिक ३० टन उत्पादन हुने फोहोर नगरभित्रै व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई घरमै छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हरेक परिवारलाई दुईवटा बाल्टिन नगरपालिकाले निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । फोहोर फालिदिएबापत नगरपालिकाले प्रत्येक घरबाट केबल २५ रुपैयाँ कर लिन्छ ।
नागरिकको घरबाट उठाएको कुहिने फोहोर कम्पोस्ट मल बनाएर किसानलाई सस्तोमा बेच्छ । नगर क्षेत्रकै किसानलाई मल किन्न प्राथमिकता दिन्छ । नकुहिने फोहोर तत्काल बेचिदिन्छ । फोहोर बेचेरै नगरपालिकाले वार्षिक ५–६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । फोहोर उत्पादन घटाउन नगरपालिकाले नगरवासीलाई अनुदानमा कम्पोस्ट बिन पनि उपलब्ध गराएको छ ।
–भक्तपुर नगरलाई सरसफाइको उत्कृष्ट नगर बनाउन जनप्रतिनिधि क्रियाशील । १५८ जना कर्मचारीमार्फत दैनिक सरसफाइ गर्दै आएकोमा २०७४ साउन १ गतेदेखि महिनाको २ दिन (प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते) नियमित सरसफाइ ।
–२०७६ जेठ १ गतेबाट प्रत्येक वडामा १÷१ वटा ट्राइसाइकलमार्फत छुट्टाछुट्टै दिन कुहिने र नकुहिने फोहर सड्ढलन ।
–श्यानिटेसन शाखामा काम गर्ने सबै १५८ कर्मचारीहरूको नियमित र निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेका छौंं ।
–फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानको लागि विशेषज्ञहरूको टोली गठन गरी अध्ययन अनुसन्धान जारी ।
–नक्सापास गर्ने घरधनीहरूलाई सहुलियत दरमा कम्पोष्ट बिन वितरण ।
–वातावरणलाई सफा र स्वच्छ बनाउन नगरको महत्वपूर्ण चौडा सडकहरूको दायाँ बायाँ रुखहरू रोप्ने काम जारी ।
वडाको सिफारिसमा प्रतिविद्यार्थी ५ लाखसम्म सहुलियतमा ऋण आर्थिक कारणले कुनै पनि विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले वडाको सिफारिसमा प्रतिविद्यार्थी ५ लाखसम्म सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने नीति लियो । चिकित्सा क्षेत्रमा उच्च जनशक्तिको अभावलाई ध्यानमा राखेर २ जना एमबीबीएस डाक्टरहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णयअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले सरकारी विद्यालयलाई सामुदायिक बनाउने सरकारी नीतिको विरोध गर्यो । विद्यालय व्यवस्थापन आफैँले जिम्मा लियो । सरकारी विद्यालय समुदायलाई जिम्मा लगाएर दायित्वबाट पन्छिने सरकारी प्रवृत्ति रोक्यो । जसको नतिजा गतिलो निस्कियो ।
नगरभित्र रहेका ९२ मध्ये ३५ स्कुल सामुदायिक छन् । केही सरकारी विद्यालयमा शिशुकक्षादेखि स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ हुन्छ । कुनै सरकारी विद्यालयमा चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन् । बागेश्वरी मावि, वासु मावि, आदर्श मावि भक्तपुरका चर्चित सरकारी विद्यालय हुन् । यी विद्यालयले एसइई परीक्षामा शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै आएका छन् ।
एसइई परीक्षाको नतिजामा सरकारी विद्यालयतर्फ यिनै तीन विद्यालय नेपालकै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुँदै आएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नगरपालिकाका मेयरदेखि अन्य पदाधिकारी छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर उठाउन यस वर्षदेखि मन्टेस्वरी सिकाइ प्रविधिको तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नगरपालिकाले सातवटा कलेज आफैँ सञ्चालन गर्दै आएको छ । दुईवटा इन्जिनियरिङ कलेज छन् । यी कलेजबाट हरेक वर्ष ४३२ इन्जिनियर जन्मिन्छन् । यी दुवै कलेज इन्जिनियरिङमा देशकै उत्कृष्ट मानिन्छन् ।
देशका ७६ जिल्लाका विद्यार्थी यहाँ पढ्ने गरेको मेयर सुनिल प्रजापतिले बताउनुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको इन्जिनियरिङ कलेज विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्छ । किनभने यहाँ पढ्ने हरेक विद्यार्थीले सुरुमै ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउँछन् । इन्जिनियरिङका विद्यार्थीलाई स्थानीय सम्पदाको बनोटबारे पनि पढाइन्छ ।
नगरपालिकाले नर्सिङ कलेज पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष ४० जना नर्स उत्पादन हुन्छन् । यीबाहेक, ओभरसियर, व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी र विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ हुन्छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षक, अभिभावक र विज्ञसँग सल्लाह गरी कक्षा १ देखि ६ सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा भक्तपुरको इतिहास, भूगोल, कला–संस्कृति, सम्पदा, खेलकुदलगायत समेटिएको छ ।
– नगरपालिकाले ३ वटा जनस्वास्थ्य केन्द्र संचालन र इमर्जेन्सी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल जनस्वास्थ्य केन्द्रमा नाक, कान, घाँटी, बाल रोग, स्त्री रोगलगायत आठ विभिन्न रोगको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छन् । नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित जनस्वास्थय केन्द्रहरूमा कूल १३ विशेषज्ञ र अन्य १५ चिकित्सक गरी हाल २८ चिकित्सकहरू तथा सोही अनुपातमा नर्सहरू कार्यरत छन् । तीनवटै स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट गरी दैनिक ५०० भन्दा बढी बिरामीहरुको सेवा भइरहेको छ ।
–ख्वप अस्पताल भवनको निर्माण कार्य जारी छ । ३ वर्षमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
– घर÷घरमा नर्सिङ सेवा प्रदान । ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला र असहाय व्यक्तिहरु लाभान्वित ।
– तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसँगको समन्वयमा च्याम्हासिंहमा सामुदायिक आँखा केन्द्र सञ्चालन । २०७५ साल चैत १५ गतेबाट मोतिबिन्दुको अप्रेसन भक्तपुरमै सुरु । दैनिक ८०—९० जनासम्म आँखाका बिरामीहरूको उपचार हुने गरेको छ ।
– २०७६ जेठ १ गतेबाट जनस्वास्थ्य केन्द्रमा २४ सै घण्टा एक्सरे सेवा, सामान्य शल्यक्रिया पनि सुरु भयो । यही वर्षदेखि अल्ट्रासाउन्ड सेवा, मानसिक रोग विशेषज्ञबाट परामर्श सेवा प्रदान प्रदान गर्दै आएको छ भने आवश्यकताअनुसार सेवाहरू थपिंदै लाने तयारी ।
– नगरबासीहरूलाई सहज स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउने ध्येयले वडा वडामा पाठेघर परीक्षण, चिनी रोग, मृगौला, उच्च रक्तचाप र आँखा शिविर सञ्चालन ।
– कडा रोग मस्तिष्कघात, मुटु रोग, क्यान्सर र मृगौला रोग लागेकाहरूलाई जनही १० हजारका दरले सहयोग ।
–आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ६९ वटा र सम्पदा संरक्षणतर्फ २५ वटा गरी ९४ वटा नयाँ योजनाहरु सञ्चालन भएको र २०७४÷७५ मा क्रमागत योजना ४७ र सम्पदा संरक्षणतर्फ २७ गरी जम्मा १६८ वटा योजना सञ्चालनमा रहेकोमा क्रमागत योजनाहरु ४४ वटा र नयाँ योजनाहरु ६१ वटा गरी १०५ वटा योजनाहरु सम्पन्न भए ।
–क्रमागत योजनाको लागि १४ करोड ५९ लाख,१९ हजार ७१९ रुपैयाँ र चालू योजनाको लागि ७ करोड,३३ लाख,७० हजार ७५४ रुपैयाँ गरी कूल २१ करोड,९२ लाख,९० हजार ४७३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
–वडा नं. १ को कार्यालय भवन, तलेजु आ“ग द्यो निर्माण सम्पन्न भनपा वडा नं. ७ को गय् भिंद्यो पुल निर्माण, भैरवनाथको मन्दिर जीर्णोद्धार, भनपा ९ स्थित बहुउद्देश्यीय भवन, माहेश्वरी घाट निर्माण, भाज्या पोखरी सडकमा ढुंगा छाप्नेलगायत काम भएका छन् ।
–खानेपानी भक्तपुरका जनताको प्रमुख समस्या हो । खानेपानी समस्यालाई ध्यानमा राखी भनपा २ सल्लाघारी, भनपा ७ गोल्मढी, भनपा ८ लिवाली र भनपा ९ तुमचो दुगुरे आवास योजनामा डीप बोरिङ गरी ती ठाउँहरूमा पानी ट्याड्ढी निर्माणको कार्य भइरहेको छ र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले थुसाचामा डीप बोरिङ सुरु गरेको छ ।
–वडा नं. १ भार्वाचोमा आकासे पानी संकलनको व्यवस्था ।
पर्यटन भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुख आयस्रोत हो । नगरपालिकाले पर्यटकहरुको सेवा सुविधाको लागि विभिन्न कार्यहरु गर्दैछ । आर्थिक वर्ष २०७५ साउन १ गतेदेखि २०७६ वैशाख मसान्तसम्म गैरसार्क पर्यटकहरु १,२९,८३० जना र सार्क तथा चिनियाँ पर्यटकहरु ९६,५४० जना गरी जम्मा २,२६,३७० जनाले भक्तपुर भ्रमण गरे । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा गैरसार्क पर्यटकहरु १,१६,६५७ जना र सार्क तथा चिनियाँ पर्यटकहरु ८१,१२८ जना गरी जम्मा १,९७,७८५ जनाले भक्तपुर भ्रमण गरेका थिए । यस आर्थिक वर्षमा गैरसार्क पर्यटकहरु १३,१७३ जना (११.२९) र सार्क तथा चिनियाँ पर्यटकहरु १५,४१२ (१९ प्रतिशत) जना गरी जम्मा २८,५८५ (१४.४५ प्रतिशत) जना पर्यटकहरु वृद्धि भएको छ ।
–क्षेत्रफलमा सानो नगर भए पनि बहुसंख्यक जनता कृषि पेशामा संलग्न भएको हुँदा किसानहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर भनपाले मौसमअनुसारको उन्नत जातको अन्न र तरकारीको बीउ वितरण हुँदै आएको छ । नगरपालिकाले प्रति परिवार आलु र गहुँ ५ केजी र धान ३ केजीका दरले निःशुल्क वितरण गर्दैछ ।
–कृषि उत्पादकत्व वृद्धिको लागि माटो परीक्षण तालिम, विषादी प्रयोग सम्बन्धि तालिम, गद्यौला मल उत्पादन, कौसी खेती, च्याउ खेतीलगायत बेमौसमी तरकारी खेतीको तालिम संचालन ।
–कृषि चुन वितरण, गहुँ चुट्ने थ्रेसर वडा वडामा वितरण गर्नुका साथै भुस्याहा कुकुर व्यवस्थापन तथा छाडा बस्तु व्यवस्थापनको काम पनि नगरपालिकाले प्रहरी प्रशासन, ट्राफिकसँग समन्वयमा गरिरहेको छ ।
चुनावी प्रतिवद्धता पुरा गर्दैछौँ
मेयर, भक्तपुर नगरपालिका
‘सांस्कृतिक नगर’, ‘नाचगानको राजधानी’ जस्ता विशेषण पाएको भक्तपुरनगरपालिकाका जनप्रतिनिधि निर्वाचनको बेला जनताबीच गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित भएका छौँ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सम्पदा संरक्षण, खेलकुदजस्ता विषयलाई प्राथमिकता तोकेर जनताको हितमा काम गर्दैछौं ।
तर, नेपालको संविधान २०७२ र संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्दैछ । लामो समयसम्म सिंहदरबारमा बसेर शासन सञ्चालन गरेकाहरु अधिकार छाड्नै चाहँदैनन् । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा दिएर सिंहदरबार पुगेकाहरू एकात्मक शैलीमै शासन सञ्चालन गर्न खोज्दैछन् ।’ प्रजापतिले भन्नुभएको छ ‘संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र स्वतन्त्र हैसियतले काम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तापनि संघमा बस्ने उच्च पदाधिकारीहरु स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी नियन्त्रित संघीयता लागू गर्न खोज्दैछन् ।
पछिल्लो उदाहरण हो, कर्मचारी समायोजन । देशभरका स्थानीय तहमा संघले कर्मचारी पठाउनु स्वायत्तताविपरीत छ । हामी आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । प्रदेश लोकसेवा गठनपछि कर्मचारी प्रदेशबाट पठाउने कानुनी बन्दोबस्त विगतको भन्दा प्रतिगामी छ । यो अधिकार जनतासम्म नपुगी प्रदेश तहसम्म पु¥याउने चाल हो । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
संविधानको धारा ३०४ मा संघीय संसद बसेको एक वर्षपछि संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरु स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारले हालै देशभरका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नाउँमा निर्देशन जारी गर्दै रिक्त शिक्षक करारमा भर्ना गर्न पत्राचार ग¥यो । मावि तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा संघ सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संविधानविपरीत पत्राचार गर्नुलाई स्थानीय तहले हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छन् । यस्ता कामहरु बन्द हुनुपर्छ ।
संघ र प्रदेशले नीति निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले आफ्नो लागि नीति निर्माणका साथै सबै खालका विकास निर्माण गर्ने संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को भावना हो । तर आ.व. २०७६÷७७ को बजेटको चर्चासँगै संघीय सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष बढाउने दौडमा लागेको समाचारले हामीलाई सोच्न बाध्य बनायो । विगतमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको बेला दिइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट अब खारेज गरिनुपर्छ । विकासको नाउँमा विनियोजन हुने रकम संघ र प्रदेशले सिधै स्थानीय तहमा पठाइएमा विकास निर्माणको काम छिटो र छरितो हुनेछ ।
विकास निर्माणको काम ठेक्कापट्टामा गराउँदा गुणस्तरहीन निर्माणहरु भइरहेका छन् । सबैभन्दा कम रकम बोल कबोल गर्नेलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन गुणस्तरहीन निर्माण हुनुको एउटा कारण हो । यसकारण समयअनुसार त्यसमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।
भक्तपुरले सम्पदा संरक्षणदेखि अन्य भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा स्थानीय जनताकै सहयोगमा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने नीति लिंदै आएको छ । उपभोक्ता समितिमा बसेर मौलिक शैलीमा कुनै किसिमको आँच आउन नदिई निरन्तर खटेर काम गर्ने सबै नगरबासीहरु धन्यवादका पात्र हुन् ।